နိုဝငျဘာ 6, 2018 – Healthy Life Journal
မျက်ခုံး ပုံသွင်းရာတွင် သိထားသင့်သည့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
၊ လရိပ်မေ ၊ မျက်ခုံးဆိုတာ မျက်နှာပုံပန်းသဏ္ဍာန်အတွက် အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ မျက်ခုံးတွေကို စနစ်တကျပုံသွင်းပြုပြင်ထားရင် မျက်နှာကို ပင့်တင်ထားသလိုဖြစ်စေပြီး ပိုကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ (၁) မျက်ခုံးကို အလွန်အမင်း မနုတ်သင့် အလှပဆုံး မျက်ခုံးဆိုတာ သဘာဝကျကျ ထူထဲလှပနေတဲ့ မျက်ခုံးပါ။ အမျိုးသမီးတွေက မျက်ခုံးတွေကို...
လက်ပေါ်မှ သစ်ခေါက်ပုံစံအနာများကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းနေသူ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဂါဇာဒေသမှ အသက် ၄၂နှစ်အရွယ် မိုဟာမက်တာလူလီဟာ Epidermodysplasia verruciformis(EV) အမည်ရ သစ်ပင်လူသားရောဂါ ခံစားနေရတာ ၁၀ နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် လက်တစ်ဖက်မှာ သစ်ခေါက်ပုံစံအနာတွေ ဖုံးအုပ်နေတာကြောင့် အိမ်အပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ အိမ်တွင်းပုန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံဟာဒါဆားဆေးစင်တာမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆံချည်မျှင်သွေးကြောဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသေးငယ်ဆုံးသွေးကြောလေးတွဖြစ်ပြီး အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးအလွှာအောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တချို့သော အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် အရေပြားအပေါ်ယံရှိ ဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေကထိခိုက်ပြီး သွေးလေးတွေ စိမ့်နေတတ်ပါတယ်။ အသားဖြူပြီး အရေပြား ပါးလျသူတွေမှာ သွေးစုပြီး အိုင်တာကို...
ကြက်ဥကို တစ်နေ့ ၂၀လုံးလောက် စားရင် . . .
မေး. ကြက်ဥကို တစ်နေ့ ၁၅ လုံး၊ အလုံး ၂၀လောက် စားတာက သင့်တော်ပါသလား။ မိုးမိုး၊ တောင်ဒဂုံ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. တစ်နေ့တည်းနဲ့ ကြက်ဥ ၁၅ လုံး-အလုံး ၂၀ စားတာက...
တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအချို့က အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတွေစားတာက အသည်းကင်ဆာအန္တရာယ် ရှိနိုင်ကြောင်း စင်ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသနအသစ်က တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ birthwort လို့လည်းအမည်တွင်တဲ့ Aristolochia မျိုးရင်းအပင် မြန်မာအခေါ် ဣဿရမူလီပင်မှာ ပါရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ aristolochic acids...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့ရာအတွက် “မိုးမှာ ပိတ်ချင်း၊ နွေမှာ ချင်း (ဂျင်း)၊ ဆောင်းတွင်း ငရုတ်ကောင်း” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ လူအတော်များများဟာ ငရုတ်ကောင်းရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံကို မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ငရုတ်ကောင်းမှာ အစွမ်းထက်...